Cameron.....: January 2014
ကျွန်မဘ၀မှာ ပထမဦးဆုံးသော ဘိုမရုပ်ကလေး..။ မေမေ ဟိုဖက်ကမ်း(မယ်ဆိုင်)မှာ ဈေးသွားဝယ်တော့ ကျွန်မအတွက်ဝယ်လာပေးခဲ့တာ...။ ဆယ်လက်မလောက်ပဲမြင့်တဲ့ ဘိုမရုပ်လေးက လှဲအိပ်ထားရင် မျက်တောင်တွေက သူ့အလိုလိုမှိတ်သွားတယ် ပြန်ထောင်လိုက်ရင် မျက်လုံးလေးပွင့်လာတယ်..။ မျက်ဆံပြာပြာ ဇာဖဲပြားကြိုးလေးနဲ့နှစ်ဖက်ခွဲပြီးချည်ထားတဲ့ ရွှေရောင်ဆံပင်ကလေး ဂါဝန်လေးနဲ့ ...ဂါဝန်အရောင်လေးကို ကျွန်မ မမှတ်မိတော့ဘူး..။ ကျွန်မ ကလေးဘ၀တုန်းက တစ်ခုတည်းသော အရုပ်ကလေးပေါ့...။ တနေ့တနေ့ ပျဉ်အိမ်နောက်ဖက်မှာ သင်ဖျူးလေးခင်းပြီး ဆော့လိုက်ရတာ အမောပေါ့..။ တခါတလေ တစ်ယောက်တည်း တခါတခါ သူငယ်ချင်းနန်းဖေါင်းနဲ့ဆော့ကြတယ်...။ အဲအရုပ်အပြင် အိုးပုပ်တွေဘာတွေကလည်း အများကြီးပေါ့..။ ကစားစရာတွေကို ဆော့ပြီးမသိမ်းဘဲ ဒီတိုင်းပစ်ထားလို့ဆိုပြီး အဖွားက ကျွန်မ ကစားစရာတွေ ပလဲထားတဲ့ သင်ဖျူးဖျာကို ဒီတိုင်းလိတ်ပြီး အရုပ်တွေရော အိုးပုပ်တွေရော အကုန်အမှိုက်ပုံးထဲထည့်ပစ်တယ်...။ အဲတုန်းက အမှိုက်ကို ချောင်းထဲပဲ သွားသွန်ပစ်လိုက်တာဆိုတော့ ကျွန်မဘိုမလေး ရေနစ်ရှာရောပေါ့...။ ကောင်းကံထောက်မစွာ တယောက်ယောက်က ကောက်ရပြီး ကျွန်မလိုပဲ သူ့ကိုချစ်ခင်ယုယစွာဆော့ကစားမယ့် ပိုင်ရှင်အသစ်လေးနဲ့ တွေ့ပါစေ..။ ကျွန်မ ဘိုမရုပ်ကလေး ပါသွားခဲ့တယ်...။ မေမေကလဲ ထပ်မ၀ယ်ပေးတော့ဘူး...။ အဲချိန်တုန်းက သိပ်မမှတ်မိတော့ပေမယ့် ကျွန်မတော်တော်လေး စိတ်ထိခိုက်သွားခဲ့တယ်....။ ကိုယ်အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး အရုပ်ကလေးကို အဖွားက အဲလိုလုပ်ပစ်လိုက်တာကိုးး...။ အဖွားတို့စ်ိတ်ကတမျိုးပဲ ကွန်မြူနစ်ရဲ့အငွေ့အသက်တွေက လွှမ်းတုန်းကိုးး..။ တစ်ဦးတည်းသော မြေးလေးဆိုပြီးလဲ တယုတယကြင်နာရကောင်းမှန်းမသိဘူး...။ အလိုလိုက်ရကောင်းမှန်းမသိဘူးပေါ့..။ အဖိုးကျတော့ အဖွားလောက်မဆိုးဘူး မုန့်ဖိုးပေးတယ် လိုချင်တာရှိလဲ ပူဆာလို့ရတယ်...။
ကျွန်မတို့အိမ်ရှေ့ဘေးဖက်အဖီလေးမှာ အုပ်ကျင်းရွာက မကွေးသားဦးမင်းကြည်တို့ညီအစ်ကိုတွေ အငှားယူပြီး အပ်ချုပ်ဆိုင်ဖွင့်တယ်...။ ယောက်ျားအ၀တ်အစားတွေ အဓိက စစ်တပ်က စစ်ဝတ်စုံတွေကိုချုပ်တာများတယ်...။ နေ့လည်နေ့ခင်းဆို ကျွန်မက အဲဦးလေးတွေဆိုင်နားမှာ ရစ်သီရစ်သီနဲ့ မကွေးထွက်ကပ်ကြေးကြီးတွေနဲ့ သူတို့ပိတ်စညှပ်တာကို ကြည့်တယ်။ အဲက ပိုထွက်လာတဲ့ ပိတ်စအပိုင်းအစတွေကိုယူပြီး အရုပ်လုပ်တယ်...။ ပိတ်ဖြူလေးကိုလိတ် ထက်ပိုင်းခေါက်လိုက်တယ် ပြီးတော့ချိုးထားတဲ့ထက်ပိုင်းအလည်မှာ နောက်ထပ် ပိတ်လိတ်လေး ထပ်ထည့်တော့ အရုပ်က ကိုယ်နဲ့လက်နဲ့ဖြစ်သွားပြီ...။ ဦးမင်းကြည်က ပန်းချီလဲဆွဲတော့ ကျွန်မအရုပ်ကို မျက်လုံးတွေ မျက်တောင်ကော့ကော့လေးတွေ ပါးစပ်တွေဆွဲပေးတယ်..။ အပ်ချည်အနက်နဲ့ ဆံပင်တွေထည့်ပေးတယ်...။ ကျွန်မလေ..အရုပ်ကလေးကို သိပ်သဘောကျတာပဲ...။ ပိတ်အစအရောင်တွေ အပွင့်အကွက်တွေကို ဦးမင်းကြည်တို့ အမိ်ှုက်ထုပ်ထဲသွားမွှေပြီး ရွေးယူ အရုပ်မလေးအတွက် ဂါဝန်တွေ အကျီင်္တွေ ထမီတွေလုပ်ပေးတယ်...။ ကပ်ကြေးနဲ့ကွကိုယ် ဂါဝန်ပုံတွေညှပ် လည်ပင်းပေါက်ဖောက်ပြီး ၀တ်ပေးနဲ့ ဟုတ်လို့ပဲ...။ အဲလို ငယ်ကတည်းက ဖက်ရှင်ဝါသနာက မသေးခဲ့ဘူး...။
ကျွန်မတို့မိသားစုနေတဲ့ အိမ်က အဖိုးတို့အုတ်တိုက်(နှစ်ထပ်အိမ်ကြီး)မဆောက်ခင်က ယာယီဆောက်ထားတဲ့ ပျဉ်ချပ်တွေနဲ့သစ်သားအိမ်လေးပါ...။ နေ့လည်ဖက် ကျွန်မက အဲသစ်သားအိမ်အပေါ်ထပ်မှာပဲဆော့လေ့ရှိတယ်...။ ခုနကပြောတဲ့ ပိတ်စအရုပ်ကလေးတွေကို အိမ်ဆောက်ပေးတယ် ဧည့်ခန်းမှာ စားပွဲထိုင်ခုံတွေလုပ်ပေးတယ်...။ မေမေတို့ဈေးရောင်းထဲထဲက မလိုတော့တဲ့ ကပ်ထူစက္ကူဗူးတွေကို အိမ်လုပ် အဲကပ်ထူနဲ့ပဲ လှေကားထစ်တွေချိုး စားပွဲထိုင်ခုံလုပ်တယ် အခန်းတွေကန့်တယ် ကုတင်လေးတွေလုပ်ပေးတယ်...။ ကျွန်မအရုပ်မလေးကလေ ကျွန်မလုပ်ပေးလို့ အိမ်တဆောင်မီးတပြောင်နဲ့ကို တခမ်းတနားနေရတာပါ...။ ဗလာစာအုပ်အဟောင်းတွေထဲက စက္ကူတွေကို အမျှင်လေးတွေညှပ် ပေတံနဲ့လ်ိမ်အောင် ဆွဲဆန့်တယ်.. အဲဒီစက္ကူပန်းစည်းတွေကို အရုပ်မလေးရဲ့ ဧည့်ခန်းမှာ ပန်းအိုးထိုးထားပေးသေးတယ်...။ အရုပ်တွေနဲ့စကားပြောလိုက် ဆော့လိုက်ပါပဲ...။ ကျွန်မဟာ တော်တော်တော့ အဆော့မက်ခဲ့တဲ့ ကလေးမလေးပါ...။ တောမှာ ကလေးဘ၀လေးကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရလို့လည်း သိပ်ကျေနပ်တာပဲ...။ မြေကြီးတွေ သဲတွေနဲ့ဆော့ရတယ် သစ်ပင်တက်တယ် တောတွေတောင်တွေ လယ်တွေထဲ လျှောက်သွားရတယ် လူကြီးတွေမသိအောင် မြစ်တွေချောင်းတွေထဲ ဆင်းကူးခဲ့လို့လဲ ရေကူးအလိုလို တတ်သွားခဲ့တယ်...။ သဘာဝတောတောင်ရေမြေနဲ့ ထိစပ်ခဲ့ရလို့ ကျေနပ်မိတယ်...။ ဒါနဲ့တင် လူဖြစ်ရကျိုးက တ၀က်နပ်သွားပါပြီ...။
အဲအရုပ်ပိစိကွေးလေးဆော့ပြီး တဆင့် ခေါင်းအုံးတွေ ခွအုံးတွေကို အနှီးတွေအ၀တ်တွေပတ်ပြီး ကလေးလုပ်ကစားသေးတယ်...။ ကလေးအမေကလဲလုပ်သေးတာ ဗိုက်ထဲ ခေါင်းအုံးလေးထည့် ဗိုက်ကြီးသည်လုပ်... ကလေးမွေး အဲကလေးကို အနှီးလေးပတ်ပေး ကလေးကို ပုခက်ထဲထည့်သိပ်ရနဲ့ပေါ့ အို...စုံနေအောင်ဆော့တာပါပဲ...။ အဲ နောက်ပိုင်း နဲနဲကြီးလာတော့ အရုပ်ထက် အိုးပုပ်တွေဆော့တယ် ဟင်းချက်တယ် တကယ့်မီးနဲ့ချက်တယ် ဖယောင်းတိုင်မီးမွှေးပြီး ဖယောင်းခဲတွေနဲ့ဆီလုပ် သစ်ရွက်စိမ်းလေးတွေကိုကြော်တယ်...။ သစ်ရွက်နုလေးတွေကို ပါးပါးလှီးပြီး ခေါက်ဆွဲလုပ်တယ်...။ ခေါက်ဆွဲရေဖျော်ဖို့ ဇကာစစ်ကို ပုလင်းအဖုံးတခု ကိုအပေါက်လေးတွေဖောက် ၀ါးချောင်းသေးသေးကိုထိပ်လေးခွဲပြီး အဲအဖုံးမှာညှပ်လိုက်တယ် ဒါဆိုလက်ကိုင်လေးဖြစ်သွားပြီ ။ မြေနီတွေကိုအရည်ဖျော်ပြီး လက်ဖက်ရည် လုပ်ရောင်းတယ်...။ ခြံနောက်ဖေးက နွေဦးမပေါက်ခင် သရက်ပွင့်လေးတွေမွှေးလာကြပြီဆို သရက်ပွင့်ကြွေလေးတွေဟာလည်း ကျွန်မတို့အိုးပုပ်ကစားစရာအတွက် ဟင်းတစ်မယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်..။ ခြံစည်းရိုးနားက ဘောင်ဘောင်သီး (အဲလိုခေါ်တယ်ထင်တာပဲ ၀ါးပြောင်းထဲထည့်ပြီး သေနပ်ပစ်သလိုဖေါက်ကြတာလေ) အဲအသီးမှည့်ပြီဆို ခူးပြီး ရည်ထဲထည့်စိမ်ထားရင် ပန်းခရမ်းရင့်ရောင်လေးရတယ် အဲဒါကို ဖျော်ရည်လေးလုပ်တယ်..။ သူ့အရွက်ကိုချေပြီး ရေဖျော်ရင်လဲ ချွဲပစ်ပစ်အစိမ်းရောင်အရည်ရတယ် သူ့ကိုလည်း ဖျော်ရည်လုပ်ပေါ့...။ အဲကတည်းက ဟင်းချက်ဝါသနာဆိုတာလည်း ပါလာခဲ့ပြီလေ...။ ကျွန်မ အိုးပုပ်ကို ဆယ်တန်းအောင်တဲ့အထိ ကစားခဲ့တယ်ဆို ယုံကြမလား...။ ဆယ်တန်းအောင်လို့ အိမ်ကိုခြောက်လပြန်နေတော့ ညီမလေးနဲ့အိမ်မှာဆော့သေးတယ်...။ ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မညီမအငယ်ဆုံးက ကိုးနှစ်ကျော်ဆယ်နှစ်ကွာပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်ရှစ်နှစ်ကျာ်လောက်က မေမေ စလုံးမှာ အလုပ်သွားလုပ်တော့ အရုပ်ကြိုက်တဲ့ ကျွန်မကို မေမေက Mc.Donald မှာ မုန့်တွေဝယ်စားပြီး ဘာဘီရုပ်လေးရအောင်ယူခဲ့ပေးတယ်...။ အဲဘာဘီရုပ်လေးကို ကျွန်မခုထိသိမ်းထားတုန်းပဲ...။ ကျွန်မငယ်ငယ်က အဖွားအမှိုက်ပုံးထဲစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ ဘိုမရုပ်ထက်တော့ ပိုလှပိုချောပိုခေတ်မှီပေါ့...။ ကျွန်မဟာ အရုပ်ဆော့ရမယ့်အရွယ်မဟုတ်တော့ပေမယ့် ဘာဘီလေးကိုကြည့်ပြီး ငယ်စဉ်က ကျွန်မရဲ့ ဘိုမလေးကို တော်တော်လေးလွမ်းသွားခဲ့တယ်...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘိုမလေးဟာ ပထမဦးဆုံး ကျွန်မကလေးဘ၀မှာ ကျွန်မစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ဖို့ ကျွန်မအတွက် ကစားဖော်လေးအဖြင့် အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုထိ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့လို့လေ...။
Posted by Cameron at 12:522comments:
Posted by Cameron at 13:29 No comments:
ကိုယ်အမြဲပြောဖူးခဲ့ပါတယ်.... မင်းဟာ ဆောင်းရာသီရဲ့ နှင်းပွင့်ဖြူဖြူလေးတွေနဲ့တူတယ်လို့...။
ဟုတ်တယ်...အိန်ဂျယ်... နှင်းပွင့်လေးတွေလိုအေးစက်ဖြူဖွေးနေတာ ပြီးတော့ စူးရှမှုမရှိ မာယာတွေမရှိတဲ့ လုံးဝအဖြူထည် စနိုးဝှိုက်လေးပါ....။
မင်းအသားတွေက နှင်းတွေလိုဖြူတယ် မင်းနှလုံးသားတွေက နှင်းတွေလိုအေးစက်တယ်.....။ မင်းနှုတ်ခမ်းတွေကတော့ နွေးထွေးလိမ့်မယ်လို့ကိုယ်ထင်တယ်...။
ခုလို နှင်းတွေကျနေတဲ့အချိန်မှာ မင်းနွေးနွေးထွေးထွေးမှရှိရဲ့လား.....?
ကိုယ့်ရဲ့စကားလုံးတွေကို မင်းလာဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့တဒင်္ဂအတွင်း အေးစက်နေတဲ့မင်းနှလုံးသားကိုနွေးထွေးသွားစေတယ်ဆို ကိုယ်ကျေနပ်တယ် အိန်ဂျယ်....။
Posted by Cameron at 14:44 No comments:
နှစ်ပတ်လည်တစ်ခုအတွက်ရတဲ့လက်ဆောင် ကလေးနာရီပေမယ့် အဲလို စပေါ့စတိုင်လ်ကိုကြိုက်တယ်
မြန်မာရင်ဖုံးဝတ်တယ် အဲနာရီပတ်တယ် ...း) (မမချစ်ညီမစစ်စစ်လေ)
၀မ်းကွဲညီမလေးလက်ဆောင်ပေးတဲ့ ဘိုလို ကလာ့ခ်ျဆိုလား ဘာလားခေါ်တဲ့ ပွဲထိုင်ပိုက်ဆံအိတ်ကလေး
ညီမတော်တ၀မ်းကွဲနောက်တစ်ယောက်ကပေးတဲ့ မျက်ရစ်ဆွဲအစိုရည် ဘော်ဘီဘရောင်းမိတ်ကပ်တောင့် ရေမွှေး
ဒါက ကွကိုယ်ဝယ်သည် Parkson shopping mall က
(Quick Silverဆိုင်က) Roxy လက်ကိုင်အ်ိတ်
ဒါလည်း Parkson ကပဲ နှင်းဆီပန်းရင်ထိုးလေးပြောပါတယ် ဘီးကုတ်လေးတွေက Spirit က
Spirit မှာ အမှန်တော့ ဂျူးစာအုပ်အသစ်သွားရှာတာ မရလို့ စာရေးကိရိယာတန်းပတ်လိုက်တာ အဲဒါတွေပါလားတယ် Handy Note book ကတော့ အွန်လိုင်းကမှတ်စရာ ချက်နည်းပြုတ်နည်းဖုတ်နည်း Recipe တွေကိုမှတ်ဖို့
Bobby Browm မိတ်ကပ်တောင့်လေးက နံပါတ်5Honey ဖြစ်တယ် ကိုယ့်အသားရောင်က နဂိုက အဖြူမဟုတ် အညိုဆိုတော့ တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ် အသားနဲ့တရောင်တည်းဖြစ်နေလို့ ကြိုက်တယ်။ Eyes Liner အရည် (ထောင်ထားတဲ့တစ်ခု)က ဆွဲပြီးရင် အရောင်ကခြောက်သွားတယ် Matte ကာလာပေါ့ ဆွဲလို့ကောင်းတယ် လှဲထားတဲ့တခုက မစမ်းရသေးဘူး
အဒေါ်တစ်ယောက် ဗုဒ္ဓဂါယာကအပြန်လက်ဆောင်တဲ့ ကုလားမလက်ကောက်ကွင်းတွေ
Posted by Cameron at 12:203comments:
သည့်တိုင်…မင်းရောက်မလာခဲ့ပါဘူး……။ ကိုယ့်ဆီကို ဘယ်တော့မှပြန်ရောက်မလာတော့တဲ့ မင်းကို ဘာ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ ကိုယ်မျှော်လင့်နေရသေးသလဲလို့ သူတို့တော့မေးကြတော့မှာပဲ…။ ကိုယ်ဘယ်လိုဖြေလိုက်ရမလဲ…..??
ဘာလိုလိုနဲ့ မင်းနဲ့ကိုယ်စဆုံခဲ့တာ သုံးနှစ်တင်းတင်းပြည့်တော့မယ် … ဒါပေမယ့် မင်းကိုယ့်အနားကနေ အပြီးပိုင်ခွဲခွာသွားခဲ့တာတော့ ဒီနေ့ဆိုဆယ့်လေးလတိတိရှိခဲ့ပြီ…။ ဘာကြောင့် (၁၄)ရက်နေ့ဆိုတဲ့ နေ့စွဲဟာ… ကိုယ့်အတွက် မင်းထားရစ်ခဲ့တဲ့ နေ့စွဲဖြစ်နေရတာလဲ….။
ကိုယ်ဟာ မင်းအတွက် ချစ်စရာမိန်းမတစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့ဘူး….. ကိုယ်ဟာ မင်းအတွက် ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့ဘူး…. ကိုယ်ဟာ မင်းအတွက် ဘာမှအသုံးမကျတဲ့ မိန်းမပဲဖြစ်ခဲ့တယ်….။
မိန်းမ မဆန်တဲ့ကိုယ်…. မင်းချစ်လာအောင် မူနွဲ့မပြတတ်တဲ့ကိုယ်… အေးစက်စက်ထုံပေပေရှိလှတဲ့ကိုယ် အဲဒီကိုယ့်ရဲ့ ဘယ်တော့မှပြုပြင်လို့မရတဲ့ ရှိရင်းစွဲအမူအကျင့်တွေကြောင့် ကိုယ်ဟာ သိပ်ချစ်တဲ့မင်းရဲ့ ထားရစ်ခဲ့ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ……။
မင်းကတော့ ဒီဆောင်းတတွင်းလုံး ဘုရားကျောင်းရဲ့ဝေယျာဝိစ္စတွေကို ကူလုပ်ရင်း မင်းတို့ဘုရားသခင်ရဲ့အရိပ်အာဝါသအောက်မှာ ပျော်ရွှင်အေးချမ်းနေရောပေါ့….။
ကိုယ့်စာတွေကို မင်းလာဖတ်သေးလား… ကိုယ်သိချင်လိုက်တာ….။
နာကျင်ခံစားမှုတွေကို ပိုက်ထွေးရင်း မိန်းမတစ်ယောက် ယနေ့ထိတိုင်ကြေကွဲလွမ်းဆွတ်နေဆဲ ဆိုတာ မင်းသိနိုင်ကောင်းပါရဲ့….။
နာကျင်မှုတွေဆိုတာ မင်းပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်မဟုတ်ပါဘူး…။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပွင့်ရိုက်စက္ကူလှလှလေးနဲ့ အဲဒီနာကျင်မှုတွေကိုထုပ်ပိုး ဖဲကြိုးလှလှလေးနဲ့ချည်ခဲ့တာပါ….။
ယုဇနပန်းတွေဖွေးခနဲ ချုံလိုက်ပွင့်နေကြပြီ အိန်ဂျယ်….။
ကိုယ်ဟာ ပန်းမချစ်တတ်တဲ့ မိန်းမမဆန်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပါ….။ ဒါပေမယ့် အဲဒီပန်းပွင့်ဖြုဖြူသေးသေးမွှေးမွှေးလေးတွေကိုမြင်တိုင်း မင်းကိုမြင်ယောင်မိတယ် နင့်နဲစွာသတိရမိတယ်…။ မင်းဟာလည်း အဲဒီပန်းကလေးလို ဖြူဖြူလေးမို့လေ….။
Posted by Cameron at 10:082comments:
၀တ်ရည် Food House နည်းလေးအတိုင်းကြော်ထားတဲ့ ဇီချွမ်ပဲပြားဝက်သားကြော်
၀က်သားကြိတ်သား 200ဂရမ် ဂျပန်ပဲပြားနှစ်ခု ကြက်သွန်မှိတ် ဇီချွမ်ငရုတ်ကောင်းမှုန့်
ကြက်သွန်ဖြူသုံးမွှာနုတ်နုတ်စင်း ပဲငပိထမင်းစားဇွန်းနှစ်ဇွန်း ငရုတ်သီးပွတောင့်တစ်ခု
ဆီဟင်းခတ်ဇွန်းကြီးတစ်ဇွန်းပူလာရင် ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ငရုတ်သီးထည့်ကြော် မွှေးလာရင် ၀က်သားထည့်ကြော်ပါမယ်...။ ပဲငံပြာရည်ကြည်ထည့်ကြော်မယ် ဇီချွမ်ငရုတ်ကောင်းကို လက်ဖက်ရည်တစ်ဇွန်းပဲထည့်ရင်တော်ပြီ...။ သူက အနံ့ပြင်းပြီး အရသာကရှတတမို့ များများထည့်လို့မသင့်ပါဘူး...။ အနံ့လေးပါရုံပေါ့...။
၀က်သားအရေခြောက်လာရင် ပဲငပိထည့်ပြီး ရေလေးနဲနဲထည့်နှပ်မယ်
ပြီးတာနဲ့ပဲပြားထည့်နှပ်မယ်...ပဲငပိက အငံပါပြီးသားမို့ အပေါ့အငံမြည်းပြီးမှ လိုမှဆားထည့်ပါလေ...
Posted by Cameron at 12:44 No comments:
ကျွန်မနှင့်မောင် အိမ်ထောင်သက် ငါးနှစ်ပြည့်တော့မည်….။ ကလေးယူဖို့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် သည်ခေါင်းစဉ်နှင့် ဆွေးနွေးသည့်အခါ အမြဲတစေ စကားများရန်ဖြစ်ခြင်းဖြင့်သာ အဆုံးသတ်ခဲ့သည်မှာ အဆန်းတကြယ် မဟုတ်တော့…။ ယခုလည်း ညစာစားပြီး တီဗီထိုင်ကြည့်ရင်းက ဇာတ်လမ်းထဲပါလာသည့် ချစ်စဖွယ် ကလေးဇာတ်ရုပ်ကလေးကို သဘောကျမဆုံးရှိကာ ကျွန်မကပဲ အမှတ်သည်းမရှိစွာ မောင့်ကို စပြောခြင်းဖြစ်သည်…။
“မောင်… မီတို့ကလေးလေးတစ်ယောက်လောက်ယူရအောင်နော်…. နော်..မောင်” ကျွန်မက ပြောရင်း အားမလိုအားမရစွာ ဘေးမှာထိုင်နေသည့် မောင့်လက်မောင်းကို ခပ်သာသာလှုပ်လိုက်သည်။ မောင့်လို အသားဖြူဖြူကြည်ကြည်နဲ့ ကျွန်မလိုဆံပင်ခွေလေးတွေနဲ့ မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်း နှုတ်ခမ်းထူထူနဲ့သားကလေး တစ်ယောက်လောက်လိုချင်ခဲ့တာ ကျွန်မအလွန်မဟုတ်ဘူး မဟုတ်လား…။ မောင့်ကိုယ်ပွားလေး တစ်ယောက် ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲ တိုးလာခဲ့လျှင် ဘယ်လောက် ပျော်ရွှင်စရာကောင်းလိုက်မလဲ….။ မောင်နဲ့ကျွန်မတို့ကြား ပို၍ခိုင်မာအောင် ချည်နှောင်ပေးသော သံယောဇဉ်ကြိုးမျှင်လေးလည်းဖြစ်ဦးမည်လေ…။
ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်မှာ တကယ်တော့ ကလေးမရခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ… မောင်ကိုယ်တိုင်က မလိုချင်ခဲ့လို့သာ ကျွန်မကလေးရူးနေသည့်ကြားက တားဆီးထားရခြင်းဖြစ်သည်…။ သူငယ်ချင်း အိမ်ထောင်သည်တွေကတော့ အဲလို ဆေးစား ဆေးထိုးပါများလျှင် တကယ်ကလေးယူချိန်မှာ ကလေးမရတတ်တော့လို့ ကလေးယူပါလားလို့ စကားဆုံတိုင်း လူချင်းဆုံတိုင်း သတိပေးတတ်ကြသည်..။ နောက်ဆုံးကျွန်မက မောင်မသိအောင် ဆေးထိုးဆေးစားမလုပ်ဖြစ်တော့ဘဲ… ရက်ရှောင်ခြင်းဖြင့်သာ ကလေးမရအောင်တားဆီးခဲ့ရသည်…။ တွေးကြည့်လေ ခါးသီးစွာကောင်းလေပါပဲ…..။ ကျွန်မက ကလေးအင်မတန်ချစ်တတ်သူ ကလေးရူးနေသူလေ…။ သူကတော့ အသိမိတ်ဆွေကလေးတွေကိုတွေ့လျှင်ပင် ချီပွေ့ဖို့မပြောနှင့် လှည့်ပင်မကြည့်တတ်ပေ…။ အဲလောက်ထိ သူအသည်းမာသူတည်း…။ ထူးခြားသည်က ကလေးအများစုမှာ သူ့ကိုတွေ့လျှင် စိတ်ဝင်တစားငေးကြည့်တတ်ကြခြင်းပင်..။ အဲလိုကလေးတွေစိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့ သူသာ ကလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်ခင်ကြင်နာယုယတတ်လျှင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မည်နည်း…။
တခါက သူ့အစ်မတစ်ဝမ်းကွဲရဲ့ သမီးကလေးကို ပြောမရ၍ ကလေးကို ဟန့်သည့်အနေဖြင့် လည်ပင်းညစ်ဖူးသည်တဲ့…။ ဘုရားရေ…မောင်တော်တော်ရက်စက်တယ် မတော်ကလေးတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင် ဘယ်နှယ့်လုပ်မလဲ ပြန်လျော်ပေးလို့ရသည့် ကိစ္စလည်းမဟုတ်…။
“မောင်……. ” ကျွန်မက သံရှည်စွဲခေါ်ပြီး မောင့်ပါးကိုလိမ်ဆွဲလိုက်သည်…။ မောင်က တီဗီကြည့်နေရင်းက စိတ်မရှည်တော့သည့်အကြည့်မျိုးနှင့် ကျွန်မကို မျက်စောင်းလှည့်ထိုးပါသည်…။ တွေ့လား…မောင်ဟာလေ ….။
ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်မက ဘေးတစောင်းလှည့်ကာ မောင့်နောက်ကျောထဲလက်ထိုးထည့်ပြီး မောင့်ခါးကိုတအားဖက်ပြီး ခပ်ချွဲချွဲပြောကြည့်သည်….။ မောင်များစိတ်လည်လာလေမလားဆိုသည့် မျှော်လင့်ချက်နှင့်ပေါ့…။
မောင်ကျေနပ်အောင် တစ်ယောက်လောက်ဟုသာပြောလိုက်ရသည် တကယ်တမ်းကျွန်မက အမွှာကလေးတောင် လိုချင်သေးတာ…။
“မောင့်လို အသားဖြူဖြူ ပါးပြင်မှာ သွေးကြောစိမ်းမျှင်လေးတွေ ယှက်နေတဲ့ မောင့်နှုတ်ခမ်းလိုမျိုး မောင့်အပြုံးမျိုးရှိတဲ့ သားသားလေးတစ်ယောက်မွေးမယ်ကွာ နော်…” ကျွန်မက ပြောလည်းပြောရင်း မောင့်ပါးပြင်တွေ မောင့်နှုတ်ခမ်းတွေကို လက်ချောင်းတွေနှင့်လိုက်တို့ထိတော့ မောင့်မှာတီဗီကြည့်နေတာကို ကောင်းကောင်းမကြည့်ရ ကောင်းလား
ဆိုပြီး စိတ်တိုလာတော့မည်…။ မောင့်ခါးကိုဖက်ထားသည့် ကျွန်မလက်မောင်းကို မောင့်က တစ်ချက်ဖျစ်လိုက်ရင်း….။
“ကဲ… ကလေးရူးမလေး…. ဇာတ်လမ်းကပြန်စပြန်ပြီလား…. ခုလောလောဆယ်တော့ ကိုယ်ပဲကလေးခဏလုပ်မယ်ဟုတ်လား ကဲဟိုဖက်တိုး ခင်ဗျားလေးပေါင်ပေါ်မှာ ခေါင်းအုံးပြီး ကြည့်မယ် ကျောညောင်းလာပြီ….” တဲ့… သူ့စကားလမ်းလွဲပုံက…။
သည်လိုနှင့် ကျွန်မ၏ ကလေးရူးတမ်းချင်း တခန်းရပ်ကာ တီဗီထဲကိုသာမောင်နှင့်အတူ နစ်မျောလိုက်ရသည်…။ ဇာတ်သိမ်းတော့ ကလေးလေးသေသွားတာကိုကြည့်ရင်း ကျွန်မငိုပါတော့သည်..။ နဂိုကမှာ မျက်ရည်မခိုင်သူမို့ ရုပ်ရှင်ကြည့်တိုင်း စာအုပ်ဖတ်တိုင်း ၀မ်းနည်းစရာအရိပ်အယောင်ပြတာနှင့် သူများမငိုခင် ကိုယ်ကကြိုပြီး မျက်ရည်ကျတတ်သူ မဟုတ်လား…။ မျက်ရည်တွေက ကျွန်မပေါင်ပေါ်အိပ်နေသည့် မောင့်မျက်နှာပေါ်ပေါက်ခနဲကျသွားပါလေရော..။
“ဟောဗျာ…ငိုပြီလား..ကလေးကျနေတာပဲ” ဆိုပြီး မောင်က ချက်ချင်းထလိုက်ပြီး ကျွန်မကိုကြည့်ပြီး ရယ်ပါတော့သည်…။ ပြီးတော့ ကျွန်မပါးပြင်ပေါ်က မျက်ရည်တွေကို သုတ်ပေးသည်…။
“မငိုပါနဲ့ကွာ…. ဒီလိုပုံနဲ့ ကလေးအမေဖြစ်ရင် ကလေးငိုတာနဲ့မီကလိုက်ငိုဆို ကလေးကို ဘယ်လိုချော့မလဲဗျ…”
“မောင်ကလည်း မောင်ကူချော့ပေးပေါ့…. မောင့်ကိုဆို ကလေးလေးကသိပ်ချစ်မှာ… ဟုတ်တယ် မောင့်မျက်နှာက ကလေးတွေချစ်တဲ့မျက်နှာမျိုး… မောင်ဘာမှမလုပ်ပြခင် သူတို့က မောင့်အနားမှာ ငြိမ်ကုတ်နေကြမှာ…မောင့်ပြောစကားလည်းနားထောင်မှာ သေချာတယ်….”
“အမလေးဗျာ.. ကလေးကဖြင့်ဘယ်ဆီနေမှန်းမသိ ချက်ချင်းကြီးပဲ ကျွန်တော်က ကလေးအဖေဖြစ်သွားပါလား”
“လုပ်ပါ…မောင်ရယ် ကလေးအဖေလုပ်ပါနော်….နော်…မီ မွေးပေးချင်လွန်းလို့ပါ… မောင်တို့များ ပြောင်းပြန် သူများတွေယောက်ျားက မိန်းမ ကလေးမမွေးပေးနိုင်ရင် နောက်မိန်းမတောင်ယူပြီးမွေးရတာ…”
ကျွန်မက မကျေမချမ်း နှုတ်ခမ်းစူပြီးပြောတော့ မောင်က ကျွန်မနှုတ်ခမ်းကို လက်သီးဆုပ်နဲ့ ခပ်ဖွဖွလာတို့ထိပြီး…
“မောင့်အတွက်က မီရှိရင်လုံလောက်ပြီလေ…..ဘာမှမလိုတော့ဘူး…” တဲ့……။
“မဟုတ်ဘူးလေ မောင်ရဲ့ မောင်မှားနေပြီ… မီက မောင့်အနားတစ်သက်လုံးနေနေမယ်လို့ ဘယ်သူအာမခံမလည်း…. မီ မောင့်အရင်သေချင်သေသွားမှာပဲလေ…..အဲခါကျရင် ဒါမှမဟုတ် အသက်ကြီးလာရင် မီတို့ကို ပြန်ပြီး ပြုစုစောင့်လျှောက်ဖို့ သားသမီးဆိုတာလိုကိုလိုတယ်လေမောင်ရဲ့..”
“အိုခေ အိုခေ… မီ ကိုယ့်ကို ဓါတ်ပြားဟောင်းပဲဖွင့်ပြမှာပဲ… ကိုယ်နားလည်တယ် သဘောပေါက်တယ်… ကိုယ်က တစ်ဦးတည်းသောသားမို့ တကိုယ်ကောင်းဆန်ချင်ဆန်လိမ့်မယ်… မီဖြစ်ချင်တဲ့ ကိစ္စကိုကိုယ်စဉ်းစားပေးမယ် ဟုတ်လား.. ဒီလောက်ဆိုကျေနပ်လား….” တဲ့…။
မဆိုးဘူးလို့ပဲပြောရမလား…… ကျွန်မတို့ အိမ်ထောင်သက်တမ်းတလျှောက်တော့ ကျွန်မမောင်နဲ့ ကလေးယူဖို့ပြောဆိုကြလျှင် ရန်ပွဲနှင့်သာအဆုံးသတ်လေ့ရှိခဲ့တာ ခုတခါတော့ မောင်က စဉ်းစားပေးမယ်ဆိုတော့ အဆင့်တော်တော်တက်လာပြီ ပြောရမည်လား… အသက်ရလာလို့ မောင့်အတွေးတွေ ပြောင်းလဲလာခဲ့လေသလားမပြောတတ်ပါ..။ ကျွန်မအသက် သုံးဆယ်ငါး မောင်က ကျွန်မထက်နှစ်နှစ်ငယ်တော့ သုံးဆယ်သုံး တကယ်ဆို ကျွန်မတို့ ကလေးယူဖို့ တော်တော်တောင် နောက်ကျနေခဲ့ပြီဆိုတာလည်း မောင်ထည့်တွေးသင့်သေးသည်….။ ခုတော့ ကျွန်မ မောင့်ဆီက ထွက်လာမည့်အဖြေကို မျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာဖြင့် ရင်ခုန်စွာစောင့်မျှော်ရပေဦးမည်…။
Posted by Cameron at 12:342comments:
အပြင်ထွက်ရင်မသောက်မဖြစ် ကာဖီပေါ့း) မုန့်ကနှစ်ခုတောင် ၀တော့မှာပဲ
egg tart နဲ့ ကြက်ဥခေါက်မုန့် ကာဖီပူပူ သယ်ရင်းတွေနဲ့အာလူးဖုတ်ခဲ့သော တင်းဂွေ
၀ါးးးး ဒါတော့အကြိုက်ဆုံးပဲ ရှမ်းပြည်မှာနေတုန်းကနေ့တိုင်းစားတဲ့ မြေပဲတိုဖူးသုပ် မုန့်တီထောင်း ယိုဒယားကာဖီအေး
ဆန်တိုဖူးချဉ်ငံစပ် ရှမ်းပဲပုဒ်စပ်စပ်လေးနဲ့ ကောင်းမှကောင်းပဲ သရေတောင်ကျချင်လာပီ
မုန့်ဆပ်သဖူးဆိုလား မှားရင်ပြင်ပေးကြပါ... အိမ်နားကဘုရားပွဲလုပ်လို့ ပုံတွေသွားရိုက်လာတာ
Posted by Cameron at 11:344comments:
မင်းကိုလွမ်းတိုင်း ကို်ယ်မင်းကိုသွားချောင်းကြည့်ခွင့်ရှိသေးတာပဲ......။ ဘယ်တော့မှ ကိုယ့်ကို ဖရန်းပြန်မလုပ်တော့တဲ့ စာမျက်နှာတစ်ခုကို ကိုယ်အပြန်ပြန်အလှန်လှန်သွားကြည့်နိုင်နေသေးတာ ဘုရားပေးတဲ့ဆုတစ်ခုလို့မှတ်ယူပါ့မယ်....။
မျက်နှာကြည်ကြည်တစ်ခု မျက်ခုံးနက်နက်တွေ မျက်တောင်တိုတိုလေးတွေ နှာတံချွန်ချွန်နဲ့ ထူထဲတဲ့ နှုတ်ခမ်းတစ်စုံကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါတိုင်း ကိုယ့်မျက်ဝန်းက မျက်ရည်တွေဘာကြောင့်ပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကျလာရသလဲ....။
၀မ်းသာတယ် မင်းကို ကြည်ကြည်လင်လင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့မြင်လိုက်ရလို့....။ ၀မ်းလည်းနည်းတယ်..ဘယ်တော့မှ ကိုယ့်ကိုလက်မခံတော့တဲ့ စာမျက်နှာတစ်ခုကို တိတ်တိတ်ကလေးပဲကြည့်ခွင့်ရလို့...။
ကိုလေးက စာမျက်နှာဆယ့်ငါးဆို ကိုယ်ကဆယ့်လေးကိုရွေးမယ်.....။ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာဆယ့်လေးရက်က မင်းနဲ့ကိုယ်နောက်ဆုံးဆုံခဲ့ကြတာ တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ရက်....။ မင်းမှတ်မိဦးမယ်ထင်ပါတယ်...အိန်ဂျယ်...။
အဲနေ့ညက ဒေါသခိုးတွေနဲ့မင်းမျက်လုံးတွေကို ကိုယ်နောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရတဲ့နေ့ပေါ့.....။ အဲနေ့ကစပြီး ကိုယ့်အနားကနေ သစ်ရွက်တစ်ခုလို လွှင့်ပါးသွားလိုက်တာ ဒီနေ့ထိပေါ့.....။
ဘယ်တော့မှမရိုးနိုင်သော တမ်းတခြင်းများစွာနဲ့ “မင်းဘယ်ဆီမှာလဲ အိန်ဂျယ်......”
Posted by Cameron at 11:545comments:
တာချီလိတ်ကမောင်လေးဝယ်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ကြက်ဥဂျုံခေါက်ဆွဲနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အသားလုံးဂျုံဆီချက်
ဘဲသားခေါက်ဆွဲထုပ်ကိုပြုတ် စားချင်တဲ့မုန်ညှင်းရွက်တို့ မှိုတို့ ဘဲဥပြုတ်တို့ထည့်ပြုတ်
ချဉ်စပ်ခေါက်ဆွဲထုတ်ကို ရွှေပဲရွက် ကြက်သွန်မှိတ်နဲ့ ဘဲဥပြုတ်ထည့်
တခုသောတနင်္ဂနွေနေ့တုန်းက ချက်စားဖြစ်တဲ့ ကြာဇံချက်
(အမေခရီးထွက်တဲ့နေ့က ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ၀က်သားပဲတွေ့လို့ နုတ်နုတ်စင်းပြီး ဘဲဥနဲ့ အကြော်မှုန့်ထည့် ကြက်သွန်ဖြူ ဂျင်းထည့်ပြီး ကြော်ထားတယ်+အချဉ်ရည် ကြက်သွန်ဖြူ ဂျင်း ငရုတ်သီးစိမ်း ပဲငံပြညရည်ကြည် သံပုရာသီး)
တစ်ခုသောစနေနေ့က ကျိုင်းတုံမြီးရှည်အရည်နဲ့ ကျွဲရိုင်းအေးအေးလေး...
Posted by Cameron at 13:24 1 comment:
ညဆယ်နာရီခွဲတော့ MRTV4 Live show ကြည့်နေရင်းနဲ့ မီးဖိုချောင်ထဲထသွားပြီး မီးသွေးမီးဖို မီးသွေးတွေ ထင်းရှူးဆီတွေသယ်ပြီး အိမ်ရှေ့ကပြင်မှာအလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ သူ့ကို အမေက တအံ့တသြနဲ့…။
“ငါးခြောက်ဖုတ်တာ မနက်ကျမှလုပ်လေအေ ညကြီးအချိန်မတော် ခက်ပါ့ညည်းကလဲ ပြီးတော့ မီးဖိုထဲမလုပ်ဘဲ ဘယ့်နှယ့်အိမ်ရှေ့ကြီးမှာ…”
အမေက တီဗီရှေ့ ၀ါးပက်လက်ကုလားထိုင်မှာ လက်ထဲက ပုတီးတန်းလန်းနဲ့ သူ့ကိုနားမလည်စွာပြောနေသည်..။
“အမေကလည်း ကျွန်မလည်း နှစ်သစ်ကိုကြိုမလို့လေ… သူများတွေက အသားကင်ငါးကင်တွေ ၀ိုင်တွေနဲ့ကြိုနေတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်မက မြန်မာဆန်ဆန် ငါးရံ့ခြောက်လေးဖုတ် အကြမ်းရည်လေးနဲ့မြည်းမယ်လေ မကျေနပ်ရင် ထမင်းဆီဆမ်းလေးနဲ့တောင်စားလို့ရသေး…”
“ညည်းကလည်းအေ… ညည်းမောင်လေးနဲ့ အေမီတို့ခေါ်တော့လိုက်မသွားဘဲနဲ့..”
နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်ပြီး အပြီးပြန်လာတဲ့ သူ့ညီမတစ်ဝမ်းကွဲက မနေ့ကတည်းကခေါ်ပါတယ် မိုင်နာကွင်းမှာလုပ်မယ့် ကောင့်ဒေါင်းပွဲသွားမယ်တဲ့…….။ သူကတော့ အသက်ရလာလို့ပဲလားမသိ ပွဲလန်းတဘင်တွေကို သိပ်ပြီးလည်း စိတ်မ၀င်စားတော့..။ ကြည့်ဦးလေ သူတို့ပြောတဲ့ မိုင်နာကွင်းဆိုတာကြီးကို ခုပဲအမေနဲ့သူ တီဗီကထိုင်ကြည့်နေတာ လူတွေထောင်နဲ့သောင်းနဲ့ချီ …ပြီးတော့နာရီနဲ့ချီ မတ်တပ်ရပ်နေရတာ တိုးဝှေ့ထိုးသိပ်နေရတာ…။ အဲမြင်ကွင်းနဲ့တင် သူကတော့ စိတ်ပျက်နေပြီ…။ အဲဒီလူတွေကြားထဲမှာ အိမ်က အငယ်ကောင်နဲ့ သူ့ညီမတစ်ဝမ်းကွဲအေမီပါသည်…။ စင်ပေါ်က ဖျော်ဖြေရေးဆိုတာကလည်း တကယ့်နာမည်ကြီးအဆိုတော်တွေမဟုတ်ဘဲ… အဆိုပြိုင်ပွဲက အဆိုတော်တွေချည်းတွေ့ရတယ်…။ နည်မည်ကြီးဆိုလို့ ရဲလေးတို့ဘာတို့ ဟစ်ဟော့အဆိုတော်တွေပါတယ်…။ ဒါတောင်ရဲလေးဆိုနေရင်း အရေမရအဖတ်မရအစီစဉ်ဖြစ်တဲ့ ကြားဖြတ် အခြောက်ပွဲထည့်လိုက်လို့ ရဲလေးပြန်လည်းတက်လာရော မကျေမချမ်းနဲ့ ပွဲစီစဉ်သူကိုကောပါလေရောလေ..။
ကျောက်မီးဖိုသေးသေးလေးမှာ သူမီးမွေးတာရသွားပြီ…။ ဟိုတနေ့က အမေ့ကိုလက်ဆောင်လာပေးသွားတဲ့ ဆားပေါ့ ငါးရံ့ခြောက်နှစ်ကောင်ထဲက တစ်ကောင်ကို ကြောင်အိမ်ထဲက သူသွားယူလာလိုက်တယ်…..။ ငါးရံ့ခြောက်က အကောင်တော်တော်ကြီးတာ အသားလည်းပြည့်တယ်..။ မီးဖိုပေါ်တင်ပြီး မီးဖုတ်ရင်း သူသဘောကျစွာပြုံးလိုက်တယ်….။ ငါးရံ့ခြောက်ကို မီးဖုတ်လိုက် စဉ်းတုံးပေါ်တင်ပြီး ငရုတ်ကျည်ပွေ့နဲ့ထုလိုက်နဲ့….။ အမေက လှမ်းပြောသေးတယ်…။
“ညည်းစတန့်ထွင်ပြီး ငါးရံ့ခြောက်ဖုတ်တာအရေးမကြီးဘူး ညကြီးအချိန်မတော် သူများတွေအိပ်နေတော အနံ့နဲ့ရော အသံနဲ့ရော နှိပ်စက်နေတာလား” တဲ့…။
အမေပြောတာကိုမကြားချင်ယောင်ဆောင်ပြီး သူကတော့ငါးခြောက်ကို ဖုတ်မြဲတိုင်းဆက်ဖုတ်နေတယ်…။ အသားလေးတွေကိုထုလိုက် မွလိုက် ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်နဲ့ ဟန်ကိုကျနေရော…။ ငါးရံ့ကဆားတော်တော်ပေ့ါတာ စားကောင်းခြင်း….။ ကြွေရည်အုပ်ထဲကို သူ့ဖွထားတဲ့ ငါးရံ့ခြောက်တွေ ပြည့်လုနီးနီးရတယ်…။ အားလုံးလည်းပြီးရော ပဲဆီမွှေးမွှေးလေးကိုဆမ်းလိုက်တယ်….။ ငါးခြောက်ကို တပြုံးပြုံးနဲ့ကြည့်နေတဲ့ သူ့အမေကတော့ သူ့ကို ရူးသွားပြီမှတ်မယ်….။
မီးပိုနေလို့ အကြမ်းရည်အတွက် သူရေနွေးအိုးတည်ထားလိုက်တယ်……။
တီဗီရှေ့ကို အကြမ်းရည်ခွက် ငါးခြောက်ဖုတ်နဲ့ ထမင်းဆီဆမ်းပန်းကန်ထည့်ထားတဲ့ ဗန်းကြီးနဲ့ သူရောက်လာတော့ အမေက မျက်လုံးမျက်ဆံပြူးပြီး….။
“ဟဲ့…အေးမ..ညည်း ဒီချိန်ကြီးထမင်းစားဦးမယ်… ကြည့်လုပ်ဦး ရာသီဥတုကအေးကအေးသနဲ့ ညသန်းခေါင်ကြီး အငံတွေစားပြီး သွေးတက် လေဖြတ်နေမယ်အေ.. တို့အမျိုးတွေအားလုံး အဲဒါနဲ့သေကုန်တာ ညည်းသိတယ်နော်… အသက်ကိုဥာဏ်စောင့်တယ်တဲ့…”
“အမေကလည်း ကျွန်မသိပါတယ်…ငါးခြောက်ကဆားပေါ့ပါ မငံဘူး မြည်းကြည့်ပါဦးလား…”
သူက ထမင်းလုတ်ထဲကိုငါးခြောက်မြှုပ်ပြီး အမေ့ကိုလှမ်းခွံမယ်လုပ်သေး..။
နှစ်ကူးဖို့ ဆယ့်ငါးမိနစ်အလိုပဲရှိတော့တယ်……။ ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ မိုင်နာကွင်းထဲကလူတွေ ဆူဆူညံညံ အုံးအုံးကျွတ်ကျွတ် ရွစိရွစိဖြစ်နကြပြီ……။
“ဒါနဲ့ အမေကအိပ်တော့လေ ညဉ့်နက်နေပြီ ဘာထိုင်လုပ်နေလဲ…”
“မစောင့်နဲ့အိပ်ရေးပျက်တယ် သွားအိပ်ချေ ကျွန်မစောင့်လိုက်မယ်… နက်ဖန်က ကရင်နှစ်ကူး အလုပ်ပိတ်တယ်…”
အမေက ပြီးရောဆိုပြီး အခန်းထဲဝင်သွားတော့ တီဗီရှေ့မှာ သူငါးခြောက်ဆီဆမ်း အကြမ်းရည်ခွက်နဲ့ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်…။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနှစ်သစ်ကို သူတစ်ကိုယ်တော် ရိုးစင်းစွာဖြတ်သန်းကြောင်းတော့ ဖဘက သူငယ်ချင်းတွေကို ပုံလေးတော့တင်ပြီး ကြွားဦးမယ်လို့ စိတ်ကူးရတာနဲ့ ငါးခြောက်အုပ် ထမင်းဆီဆမ်းပန်းကန်နဲ့ အကြမ်းရည်ခွက်ကို ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက်သေးတယ်..။
အမယ် ဘာတဲ့ MRTV4က အစီစဉ်ကြော်ငြာတဲ့ကောင်က ဒီနှစ်ကောင့်ဒေါင်းကို သူများနိုင်ငံနဲ့မတူအောင် ကပြီးကြိုဆိုမယ်တဲ့….။ ဘာများကကြမှာမို့လဲ အိုပါဂဏန်းစတိုင်လ်ကလွဲလို့….။ စိတ်ကုန်ချက်….။ အောက်ကလာကြည့်တဲ့သူတွေကလည်း သူခိုင်းတာအကုန်လုပ်ရတယ်……။
ဆယ့်နှစ်ဒေါင်ခနဲလည်းထိုးရော… အောင်မလေး ဘယ်ချိန်ကတည်းကစောင့်နေကြလည်းမသိတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက ငနဲသားတွေ လမ်းပေါ်မှာ အသံသေးအသံညောင်နဲ့ အော်ကြတော့တာပဲ…။ နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုတဲ့အသံတွေကလည်း တော်တော်ကျက်သရေရှိကြတယ် လူသတ်တော့မယ့်အသံမျိုး အရည်တွေဝင်လို့သတိလွတ်ဟစ်နေကြတာတွေ……။
သူပန်းကန်တွေဆေးကြောသိမ်းဆည်းပြီး…တီဗီရှေ့ကဖျာလေးမှာ ခေါင်းအုံးချပြီး လှဲလိုက်တယ်…။ ဖန်သားပြင်က နှစ်သစ်ကြိုတဲ့အစီစဉ်ကမပြီးသေး…။ သူ့မောင်ကလေးကို ဒီမှာအိပ်ရင်းစောင့်ရပေဦးမယ်…..။ ဖုန်းမက်ဆေ့တွေကလည်း ဆိုက်တိုက်ဝင်လာ သေးတယ်။ သူကတော့ ဘယ့်သူဘယ်သူကိုမှ နှစ်သစ်နှုတ်ဆက်ဖို့စိတ်မကူးဘဲ ဖုန်းထဲက Candy crush ကိုကစားရင်း နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုလိုက်တယ်…။
ဒါပါပဲ…. အေးမရဲ့ ရိုးစင်းတဲ့ နှစ်သစ်အကြိုအစီစဉ်ကတော့…ဘယ်လိုလဲ သူများနဲ့မတူ တမူထူးခြားတယ်မှုတ်လား…..း))
Posted by Cameron at 11:575comments: